शेयर माफियाको चलखेल
Tuesday, 13 Mar, 2018 11:20 AM
काठमाडौं, २९ फागुन । अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. युवराज खतिवडाको आगमनसँगै नेपाली शेयर बजारमा एउटा अचम्मको अभ्यास भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले भन्दै नभनेको, बोल्दै नबोले र हुँदै नभएको कुराहरु अघि सारेर शेयर बजारमा माफियाहरुले चलखेल गर्ने प्रयास गरिरहेको खुलेको छ ।
अघिल्लो सातादेखि नयाँ अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई देखाएर शेयर बजारका केही माफियाहरुले चलाएको स्याहुईय्याको कारण शेयर बजार लगातार प्रभावित हुँदै आएको छ । समय मिलाएर माफियाहरुले शेयर बजारमा कब्जा जमाउने प्रयास गर्दा शेयर बजार लगातार घट्ने क्रममा देखिन आएको छ । तर, यसको पछाडि कुनै बैज्ञानिक कारण नभई शेयर बजारप्रति जनताको विश्वासमा फैलिएको भ्रम नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार देखिन्छ । वैज्ञानिक कारण भन्नाले कुनै पनि कम्पनीको वित्तिय अवस्था जोखिमा गएको वा असाध्यै राम्रो भएको, कम्पनीले धेरै नाफा कमाएको वा घाटा व्यहोरेको तथा कम्पनीले यसअघि दिँदै आएको लाभांशमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावनाको कारण बजारमा शेयर मूल्यमा गिरावट आउने वा उछाल हुने गर्दछ ।
कम्पनीहरुको वित्तिय अवस्था सार्वजनिक हुने समय नहुँदै शेयरको मूल्य घट्नु भनेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको देखिन आएको छ । केही सेयर लगानीकर्ताहरुले शेयर बजारका ठूला लगानीकर्ताहरुले सेटिङ गरेर शेयरको नियोजित रुपमा मूल्य घटाएर अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई असफल बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । लामो समयसम्म कांग्रेसीहरुले कब्जा जमाएको नेपालको शेयर मार्केटमा अहिले तिनै लगानीहरुको सेटिङमा शेयर बजारको मूल्य घटाएर अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
तर, बास्तविकता भने बेग्लैछ । शेयरको मूल्य घट्ने भन्दा पनि तीव्र गतिमा बढ्ने सम्भावना प्रवल रहेको अर्थक्षेत्रका ज्ञाताहरुको दावी छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सबैभन्दा पहिला घरजग्गामा प्रवाह भएको बैंक ऋण नियन्त्रण गर्ने र त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा घरजग्गाको कारोबारमा पर्ने र अप्रत्यक्ष रुपमा शेयर बजारमा उक्त एक्सनको परिणाम सकारात्मक रुपमा देखिने अर्थक्षेत्रका ज्ञाताहरुको भनाई छ । नेपालको स्टक बजार केही पुरानो भएपनि भर्खरै सुरुवाती अवस्थामा झै एक हजार देखि दुई हजारको बीचमा घुमिरहेको भन्दै अबको केही वर्षमै नेप्से कम्तिमा पाँच हजार र बढिमा आठ दश हजारसम्म पुग्ने भविष्यवाणी गरिएको छ । यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीलाई भूत बनाएर मूल्य घटाई ठूलो मात्रामा शेयर उठाउने गिरोहले चलखेल गरेको आशंका छ ।